प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको गोप्य भेटवार्ता कसरी भयो लिक ? – GALAXY
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको गोप्य भेटवार्ता कसरी भयो लिक ?
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच भएको गोप्य भेटवार्ता बाहिरिएको छ । विश्वस्त श्रोतका अनुसार देउवा र जबराको भेट महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा भएको थियो ।
गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयले राजनीति तातेका बेलामा कार्यपालिका र न्यायापालिकाका प्रमुखबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खुलासा भएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाको ससुराली खलकका नाता पर्ने प्रमोद राणाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा उनीहरुको भेट भएको थियो ।
स्रोतले भन्यो, ‘केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि देउवा र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटवार्ता पनि प्रमोद राणाकै निवासमा भएको हो । यो भेटवार्ताको सिलसिला महिनौं चलेको थियो ।’प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग नखोजेको भए मिडियामा चर्चा भएअनुसार हमाल नै किन मन्त्री बनाईए त ? यो विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।